Inona no atao hoe penicillin g? - BALLYA
Posted on March 13, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona no ilana ny penicillin?
Ahoana ny fiasan'ny penicillin?
Vokatry ny penisilinina
Ny penicillin dia fantatra amin'ny anarana hoe penisilinina g, sodium penicillin, sodium benzyl penicillin, potassium penicillin, ary potassium benzyl penicillin. Penicillin dia karazana antibiotika. Izy io dia manondro kilasin'ny antibiotika misy penicillane ao amin'ny molekiola, izay afaka manimba ny rindrin'ny sela bakteria ary miteraka vokarin'ny bakteria mandritra ny fotoana fiompiana sela bakteria. Izy io dia antibiotika nalaina avy amin'ny penicillium. Penicillin dia an'i beta lactam antibiotika (β-lactams), ao anatin'izany penisilinina, cephalosporins, carbapenems, monocyclics, cephamycin, sns. Ny penicillin dia fanafody famonoana bakteria tena be mpampiasa. Na izany aza, tsy maintsy atao ny fitsapana ny hoditra alohan'ny hampiasana azy mba hisorohana ny areti-mandringana.
penisilinina dia antibiotika manan-danja miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta, poizina ambany ary fampiharana ara-pahasalamana malalaka. Ny fivoarany mahomby dia nanatsara be ny fahafahan'ny olombelona manohitra ny aretina mikraoba ary nanjary teraka ny fianakavian'ny antibiotika. Ny fisehoany dia nanokatra vanim-potoana vaovao amin'ny fitsaboana aretina amin'ny antibiotika. Taorian'ny fanatsarana am-polony taona maro, ny tsindrona penicillin sy penicillin am-bava dia afaka nanasitrana pnemonia, meningite, endocarditis, diphtheria, anthrax ary aretina hafa.
Taorian'ny penicillin, antibiotika toy ny streptomycin, chloramphenicol, oxytetracycline, ary tetracycline novokarina tsy tapaka, izay nanatsara ny fahafahan'ny olombelona mitsabo areti-mifindra. Fa miaraka amin'izay dia mihombo tsikelikely ny fanoherana ny bakteria sasany. Mba hamahana izany olana izany dia mamorona antibiotika mahery vaika kokoa ny mpikaroka amin'izao fotoana izao, mizaha ny fomba hisorohana ny mikraoba tsy hahazo ny génie fanoherana, ary ny fampiroboroboana zava-mahadomelina fanoherana bakteria amin'ny fampiasana zavamaniry ho akora.
Ny Penicillin dia tsy mahazaka ny anzima vokarin'ny soritr'aretin'ny fanoherana ny zava-mahadomelina (toy ny Staphylococcus aureus mahazaka zava-mahadomelina), ary mora simba amin'izany, ary tery ny fiparitahan'ny bakteria, izay mahomby indrindra amin'ny bakteria Gram-positive. Ny penicillin G dia azo zaraina ho sira potasioma sy sira sodium. Tsy ny tsiranoka potasioma ihany no azo tsindrona amin'ny lalan-drà, fa ny habetsahan'ny ion-potasioma kosa dia tokony hikajiana tsara mandritra ny fitetezana intravenous, mba tsy hampidirana ao amin'ny vatan'olombelona mba hamoronana hyperkalemia sy hanakana ny fiasan'ny fo ary hiteraka fahafatesa.
Antibiotika Penicillin misy poizina kely. SATRIA laktama beta mihetsika eo amin'ny rindrin'ny sela misy bakteria, fa ny olona kosa tsy manana afa-tsy fonon-selan'ny sela tsy misy rindrin'ny sela, tsy dia misy poizina ho an'ny olombelona izy ireo. Ankoatry ny fiakaran'ny fihetseham-po mahery vaika dia tsy miharihary ny poizina ao.
Ny fitsapana intradermal dia tsy maintsy atao aloha alohan'ny hampiasana azy. Ny fitsapana alikan'ny penicillin dia misy fomba fitsapana hoditra (antsoina hoe fitsapana ny hoditra penicillin) ary ny fomba fitsapana in vitro, izay ny tsindrona intradermal no marina kokoa. Mampidi-doza koa ny fitsapana ny hoditra. Manodidina ny 25% ny marary maty noho ny hatairana tsy mahazaka anaphylactic no matin'ny fitsapana amin'ny hoditra. Noho izany, ny fanomanana famonjena dia tokony hatao mandritra ny fitiliana ny hoditra na ny fitsaboana amin'ny tsindrona. Rehefa miova amin'ny karazana penicillin hafa dia tsy maintsy averina ny fitsapana ny hoditra. Ny vovo-tany maina dia azo tehirizina mandritra ny taona maro nefa tsy lany daty, fa ny vahaolana fanindronana sy ny vahaolana amin'ny fitsapana ny hoditra dia tsy milamina. Ary ho an'ireo izay tsy miasa ara-dalàna ny renal, ny fatra dia tokony ahitsy araka ny tokony ho izy. Ho fanampin'izany, ny fampiharana lohahevitra dia manana vintana maro hanentanana, ary ny bakteria dia mora tohina amin'ny fanoherana zava-mahadomelina, noho izany dia tsy tokony hasaina.
3. Inona no ilana ny penicillin?
Ny penicillin g dia ampiasaina amin'ny aretina ateraky ny bakteria mora tohina na ny otrikaretina mikraoba. Pharyngitis, tonsillitis, tazo mena, endocarditis, erysipelas, cellulitis ary tazo puerperal ateraky ny hemolytic streptococcus. Pnemonia, otitis media, meningite ary bacteremia ateraky ny pneumococcus, Tetanus ary ny gangrene entona vokatry ny Clostridium.
Ho an'ny pharyngitis, tazo mena, cellulitis, septic arthritis, pnemonia, tazo fivontosana ary sepsis ateraky ny vondrona A β-hemolytic streptococcus, penicillin g dia misy vokany tsara ary io no fanafody tian'ny olona indrindra. Ho an'ireo otrikaretina mahery vaika etsy ambony, fitetezana rano mitete intravenous in-4 isan'andro, isaky ny 1.2 tapitrisa ka hatramin'ny 1.6 tapitrisa. Ny fitsaboana ny pharyngitis dia tokony hotanterahina farafahakeliny 10 andro mba hahazoana antoka fa ny bakteria pathogenika dia esorina amin'ny pharynx mba hialana amin'ny tazo rheumatic amin'ny ho avy. Ny meningite purulent maranitra sy ny endocarditis ateraky ny Streptococcus pyogenes dia tokony haterina amin'ny alàlan'ny tsindrona penicillin g (10 tapitrisa ka hatramin'ny 20 tapitrisa U isan'andro).
Aretina vokatry ny streptococci hafa: ao anatin'izany ny vondrona B β-hemolytic streptococcus, viridis streptococcus ary faecalis streptococcus nateraky ny aretin'ny taovam-pisefoana, meningitis purulent maranitra (meningite), endocarditis ary sepsis ary aretina hafa. Ny streptococcus pneumoniae dia mora tohina amin'ny penicillin G, ary ny fitsaboana penicillin G no safidy voalohany.
Meningite ateraky ny meningococcus na bakteria mora tohina hafa: ny penicillin g dia miditra an-tsokosoko amin'ny sakana ara-dalàna ny ra-serebrospinal ary miditra kely ao anaty tsiranoka cerebrospinalina, saingy mihabe ny permeabilité rehefa simba ny meninges noho ny fivontosana, noho izany dia mandaitra ny fitsaboana fatra avo lenta. Ny fatra fanombohana ho an'ny olon-dehibe dia 10 ka hatramin'ny 20 tapitrisa U isan'andro, mizara efatra mitete intravenous.
Ny gonorrhea ateraky ny Neisseria gonorrhoeae: Neisseria gonorrhoeae dia mora tohina penisilinina g, fa ny bakteria tsy mahazaka zava-mahadomelina dia nitombo be tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary ny sasany mahatohitra mafy. Noho izany dia ilaina ny manapa-kevitra raha hampiasa penicillin G araka ny valin'ny fitsapana ny fahatsapana, ary ny habetsaky ny fitsaboana dia tokony hiorina amin'ny fahatsapana koa.
Syphilis ateraky ny Treponema pallidum: ny Penicillin G no mbola fanafody manasitrana lehibe indrindra. Ny penicillin G be fatra avo indrindra dia tokony hampiasaina amin'ny fitsaboana sipla faharoa sy fahatelo na tranga lehibe amin'ny dingana voalohany, indrindra ireo izay manana soritr'aretin'ny rafi-pitabatabana voalohany, 5 tapitrisa hatramin'ny 20 tapitrisa U isan'andro, mitete intravenous, 3 ka hatramin'ny 4 herinandro amin'ny fitsaboana.
Ny areti-mifindra ateraky ny bacilli gram-positive: ny tsimok'aretina vokatry ny tetanus, diphtheria, ary antracis dia tokony hotsaboina amin'ny penicillin g sy antitoxin. Ny penicillin dia matetika ampiasaina amin'ny dermatology noho ireto aretina manaraka ireto: sifilis, gonorrhea, hafa toy ny tazo mena, cellulitis, erysipelas, erysipelas, pyoderma, sns.
4. Tantaran'ny penicillin
Iza no nahita penicillin? Talohan'ny 1940, ny olombelona dia tsy nahavita nifehy zava-mahadomelina izay afaka mahomby amin'ny fitsaboana ny aretin-bakteria amin'ny voka-dratsy. Raha misy olona voan'ny tioberkilaozy tamin'izany dia midika izany fa ho faty tsy ho ela ilay olona. Mba hanovana izany toe-javatra izany, ny mpikaroka siantifika dia nanao fikarohana nandritra ny fotoana ela, saingy ny fandrosoana fivoarana namboarina tamin'ity faritra ity dia nateraky ny fahitana tsy nahy.
Amin'izao vanim-potoana maoderina izao dia nahita ny penicillin voalohany, antibiotika voalohany an'izao tontolo izao i Fleming, anglisy, tamin'ny taona 1928. Nahita penicillin i Alexander Fleming noho ny hadisoana vintana iray.
Tamin'ny taona 1928, ny mpahay siansa anglisy Fleming dia nahita penicillin voalohany tamin'ny fikarohana andrana, saingy noho ny tsy fisian'ny haitao mandroso sy ny fahatakarana lalina tamin'izany fotoana izany dia tsy nampisaraka an'i Penicillin irery i Fleming.
Taorian'ny andrana fanandramana mahery vaika dia nampiasa fanamainana mangatsiaka i Flory sy Chann tamin'ny fitrandrahana kristaly penicillin. Taty aoriana dia nahita bobongolo tamin'ny melon iray i Flory izay azo ampiasaina hanangonana penicillin be dia be, ary nampiasa lafarinina katsaka mba hanomanana vahaolana kolontsaina mifanaraka amin'izany. Natosiky ny valim-pikarohana ireto, ny orinasa mpamokatra fanafody amerikana dia nanomboka namokatra penicillin betsaka tamin'ny 1942.
Tamin'ny 1943, ny orinasa mpamokatra fanafody dia nahita fomba hamokarana penicillin ao anaty andiany. Tamin'izany fotoana izany dia niady tamin'i Alemana nazia i Britain sy Etazonia. Ity fanafody vaovao ity dia tena mandaitra amin'ny fifehezana ireo aretina amin'ny ratra.
Noho io famoronana lehibe io, tamin'ny taona 1945, Fleming, Flory ary Chann no nahazo ny loka Nobel momba ny fisiolojia na ny fitsaboana noho ny "fahitana penicillin sy ny vokariny klinika."
Penicillin G: toy ny penicillin G potassium, penicillin G sodium, penicillin, sodium penicillin, sodium benicil penicillin, potassium penicillin, potassium benzyl penicillin, sns.
Penicillin V: (alias: phenoxymethyl penicillin, 6-phenoxyacetamidoido penicillanic) toy ny penisilinina V potasioma (ao anatin'izany ny endrika fatra maro).
Pénicilline mahazaka enzimme: toy ny oxacillin, chloroxacillin, sns.
Ampicillin: toy ny ampicillin, amoxicillin, Etc.
Penicillins anti-pseudomonas: toy ny carbenicillin, piperacillin, ticarcillin, sns.
Mecillin sy ireo esteran'ny Pimethicillin: miavaka amin'ny fanoherana ny anzima ary mandaitra amin'ny bacilli ratsy (toy ny bacillus coli, Klebsiella ary Salmonella), fa mahantra manohitra Pseudomonas aeruginosa Bacillus.
Methicillins: toy ny tamoxilin, sns.
Antibiotika Penicillin no teny ankapobeny ilazana kilasy antibiotika lehibe ao laktama beta. Satria ny act-laktams dia mihetsika eo amin'ny rindrin'ny bakteria, raha ny selan'ny sela ihany no tsy misy rindrin'ny sela, ny antibiotika penicillin kosa dia tsy misy poizina ary antibiotika manana index chemotherapy lehibe indrindra.
Na izany aza, ny mahazatra fanehoan-kevitra mahazaka ny penicillin ny antibiotika dia mitana ny laharam-pahamehana voalohany amin'ireo zava-mahadomelina isan-karazany, miaraka amina tranga hatramin'ny 5% ka hatramin'ny 10%. Fanehoan-kevitry ny hoditra izany, mampiseho ny maimaika, ny angioedema, ary ny tranga faran'izay mafy dia ny fikorontanana anaphylactic, ny ankamaroany aorian'ny tsindrona ao anatin'ny minitra vitsy. Ary ny soritr'aretina dia ny dyspnea, ny sianose, ny fihenan'ny tosidra, ny koma, ny rantsam-batana mafy ary ny fikorontanana. Ny tsy fanavotana amin'ny fotoana mety dia mety hahafaty. Ny làlam-pitantanan-draharaha isan-karazany na ny fampiharana ny fanomanana isan-karazany dia mety hiteraka hatairana anaphylactic, fa ny tsindrona no be mpitranga indrindra.
Ny fisian'ny fanehoan-kevitra mahazaka dia tsy misy ifandraisany amin'ny habetsan'ny fatra fanafody. Ny olona tsy mahazaka an'ity vokatra ity dia mety hiteraka hatairana na dia kely dia kely aza. Ny tsindrona ao amin'ny vatana dia mety hiteraka fiparitahan'ny epileptika. Ny doka lehibe sy maharitra dia manapoizina ny rafi-pitabatabana afovoany (toy ny haintona, koma, sns.), Ary azo averina amin'ny alàlan'ny fampijanonana ny zava-mahadomelina na hampihena ny fatra.
Ny fampiasana am-bava dia simban'ny asidra gastric sy ny anzima fandevonan-kanina. Raha tsindrona intramuskular na subcutanère dia haingana kokoa ny fandraisana azy, ary ny tampon'ny fatran'ny plasma dia azo atao ao anatin'ny 15-30 minitra. Penicillin dia manana antsasaky ny androm-piainan'ny vatana ary mivoaka amin'ny urine amin'ny endriny voalohany.
Ny vokatra ara-panafody ny penicillin dia ny manelingelina ny firafitry ny sela misy bakteria. Ny firafitry ny penicillin dia mitovy amin'ny D-alanyl-D-alanine ao amin'ny rindrin'ny sela mucopeptide. Izy io dia afaka manakana ny famoronana ny mucopeptides, mitarika ny lesoka amin'ny rindrin'ny sela, ary mahatonga ny bakteria ho very sakana azo idirana.
1. Pélicillin Allergy
Haingana dia haingana ny fanosorana aorian'ny fitantanana am-bava. Manodidina ny 75% ka hatramin'ny 90% ny penicillin no azo alaina ao amin'ny lalan-drà amin'ny gastrointestinal, ary ny sakafo dia tsy misy akony lehibe amin'ny fitrohana zava-mahadomelina. Ny tahan'ny famehezana ny proteinina dia 17% ka hatramin'ny 20%, ary ny antsasaky ny lo dia tokony hialana amin'ny rà (t1 / 2) dia hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 1.3 ora, manodidina ny 24% ka hatramin'ny 33% ny fatra no voaangona ao amin'ny atiny aorian'ny fihinanana fanafody. , ary 46% ka hatramin'ny 68% ny fatra dia avoakan'ny moka ao anatin'ny 6 ora amin'ny maha prototype form azy. Ny fanafody sasany dia mivoaka amin'ny alàlan'ny tract biliary. Ny antsasaky ny serumin'ny marary voan'ny aretin'ny voa mafy dia azo hitarina hatramin'ny 7 ora. Ny dialyma serum dia afaka manala ny penicillin, fa ny dialy peritoneal kosa dia tsy misy fiatraikany amin'ny fanesorana ilay vokatra.
Ny penicillin dia misy fiatraikany poizina faran'izay kely indrindra amin'ireo antibiotika isan-karazany, satria ny fihenan'ny penicillin dia ny manimba ny fizotrany sy ny firafitry ny fiforonan'ny rindrin'ny sela, ary ny vatan'olombelona dia tsy manana rindrin'ny sela. Ny penicillin amin'ny ankapobeny dia tsy misy poizina ara-panafody amin'ny vatan'olombelona, ​​fa ny fatra penicillin betsaka kosa dia mety hiteraka fanapoizinana ao amin'ny rafi-pitatitra. Ny antony lehibe mahatonga ny voka-dratsin'ny penicillin dia ny tsy fahadiovan'ny penicillin, ary ny loto ao aminy dia mora mahatonga ny vatan'olombelona ho tsy mahazaka.
Matetika ny allergy penicillin dia laharana voalohany amin'ireo fanafody isan-karazany. Ny fanehoan-kevitra mahery vaika dia ny hatairana anaphylactic (karazana allergy I), ary ny tahan'ny tranga dia 0.004% ka hatramin'ny 0.015%. Ny allergie Type II dia ny anemia hemolytic, ny fipoahan'ny zava-mahadomelina, ny dermatitis amin'ny fifandraisana, ny nephritis interstitial, ny fanafihana ny asma, sns, ary ny allergy III (ny fihenan'ny serotype), izay mahazatra ihany koa, miaraka amin'ny tranga 1% ka hatramin'ny 7%.
Ireo mararin'ny fikorontanana anaphylactic izay tsy voavonjy ara-potoana dia manana taham-pahafatesana betsaka. Noho izany, raha vao mitranga izany, ny marary dia tsy maintsy avotra eo noho eo, ary avy hatrany manome azy tsindrona intramuscular 0.1% epinephrine 0.5-1ml. Raha ilaina dia arotsaho amin'ny tsindrona glucose 5 na glucose klorida amin'ny tsindrona intravenous, ary raha tsy mihatsara ny fisehoan'ny klinika dia avereno antsasak'adiny aorian'izany.
Raha nijanona ny fitempon'ny fony, dia azo atsofoka ao anaty ny adrenaline. Mandritra izany fotoana izany, ny fampidirana intravenous ny fatra be amin'ny hormonina korten adrenal dia tokony hoheverina ho famenon-dra. Ireo marary manana tosi-dra maharitra dia homena dopamine sy fanafody vasoactive hafa. Izy io koa dia afaka mandinika ny fampiasana antihistamines hanamaivanana ny urticaria. Ireo marary manana fahasahiranana amin'ny fifohana rivotra dia tokony homena fofohana oksizenina na fofonaina artifisialy, ary ireo izay manana edema laryngeal mazava ho azy dia tokony hanana tracheotomy ara-potoana. Ny fampiharana ny penicillinase dia tsy misy dikany firy.
2. Encephalopathy Penicillin
Ny encephalopathy Penicillin dia rafitra tsy fahita firy ao amin'ny rafi-pitatitra atin'ny penisilinina. Matetika ny penicillin kely dia mamakivaky ny sakana amin'ny ati-doha, fa rehefa be loatra ny fatrany ary haingana loatra ny hafainganan'ny fampidirana intravena dia misy fanafody be dia be miditra ao amin'ny vatan'ny ati-doha, izany hoe ny fifantohan'ny fanafody amin'ny rà ary mitombo ny tsiranoka cerebrospinal, manelingelina ny fiasan'ny rafi-pitabatabana ara-dalàna ary miteraka valinteny mahery vaika eo amin'ny rafi-pitabatabana, toy ny hyperreflexia, ny fahatsapana tsy fahampiana, ny halatra, ny hainteny, ny fahalavoana, sns.
Rehefa lehibe loatra ny fatran'ny penicillin, indrindra ny penicillin g, na haingana loatra ny tsiranoka intravenous, ny fatran'ny penicillin ao amin'ny tsiranoka cerebrospinal dia mihoatra ny 8U / ml, izay afaka mandrisika mivantana ny valan'aretina serebral, miteraka fihetsika mahery vaika toy ny fikororohana, fivontosana, epilepsy ary koma mihitsy aza. Ireo soritr'aretina ireo dia mipoitra ao anatin'ny 24-72h aorian'ny fitsaboana. Matetika izy io dia mitranga amin'ny zaza vao teraka, ny ankizy ary ny be antitra satria mora miditra amin'ny sakana amin'ny ati-doha ny fanafody. Ho an'ireo marary mihena ny fiasan'ny voa na ny tsy fahombiazan'ny voina dia mora mitranga ihany koa izany noho ny tsy fitrandrahana zava-mahadomelina.
Ny neurite peripheral dia mety hitranga ao amin'ny faritra fanindronana intramuskular penicillin. Ny tsindrona intrathecal misy singa maherin'ny 20,000 XNUMX na fampidirana intravenous ny fatra penicillin lehibe dia mety hiteraka clonus hozatra, haintona, koma ary fanehoan-kevitra hafa. Ity fihetsika ity dia mahazatra kokoa amin'ny zazakely, ny be antitra ary ireo marary manana fihenan'ny voa. Ny penicillin dia mety miteraka fizarana psychotic indraindray. Aorian'ny fampiharana ny penicillin procaine, ny marary tsirairay dia mety hiteraka tazo, fanahiana ary tazo mahery.
Ny toe-javatra mahatsiravina dia mety hitranga, miseho indrindra amin'ny fisehoan'ny fikorontanana tampoka, ny tsy fahampiana rano, ny hypoxia, ny sempotra ary ny fiovan'ny simia amin'ny rà (toy ny hypoglycemia, hyponatremia, acidemia), fiakaran'ny tosidrà, fitepon'ny fo haingana, ny fangirifiriana, ny fikorontanana, ny koma ary ny tsy fahombiazan'ny taovam-pisefoana. Ny mekanika an'io fihetsika io dia tsy fantatra. Ny ankizy sasany koa mety marary tongotra aman-tongotra. Ny ankizy izay tsy mikatona ny fontanelles dia mety mivonto ny fontanelles, ary ny ankizy kely dia mety manana fihetsiketsehana tsy mifanaraka. Ireo soritr'aretina etsy ambony dia miseho 1 hatramin'ny 2 herinandro aorian'ny aretina voalohany.
Maharitra ny koma ary mety hitarika ho an'ny sezela matotra. Ny sezela dia mety ahatafintohina, fahajambana, marenina ary mararin'ny paralysisa. Marary vitsivitsy no mety maty noho ny aretina mafy.
Penisilin g dia kilasin'ny antibiotika avo lenta sy misy poizina ambany, ary be mpampiasa amin'ny klinika. Na izany aza dia mahazatra ny fanehoan-kevitra mahazaka alikaola ka tsy maintsy atao alohan'ny fampiasana azy ny fitsapana ny allergy.
MedlinePlus: Penicillin G (Potassium, Sodium) tsindrona
FDA: Fanontaniana sy valiny ho an'ny mpanjifa amin'ny Penicillin G Procaine